Ahene Nhoma a Edi Kan 3:1-28
Solomon waree Farao babea (1-3)
Yehowa yii ne ho adi kyerɛɛ Solomon wɔ dae mu (4-15)
Solomon srɛɛ nyansa (7-9)
Solomon buu mmaatan baanu ntam atɛn (16-28)
3 Solomon kɔwaree wɔ Egypt hene Farao fi; ɔwaree Farao babea+ de no baa Dawid Kurow+ mu kosii sɛ osii ɔno ara ne fi+ ne Yehowa fi+ ne Yerusalem fasu+ no nyinaa wiei. 2 Nanso sorɔnsorɔmmea* hɔ ara na na ɔman no bɔ afɔre,+ efisɛ besi saa bere no, na wonnya nsii ofi mmaa Yehowa din.+ 3 Solomon kɔɔ so dɔɔ Yehowa; ɔnantew ne papa Dawid ahyɛde mu. Nanso ɔbɔɔ afɔre na ɔhyew afɔrebɔde daa wɔ sorɔnsorɔmmea hɔ.+ 4 Ɔhene kɔɔ Gibeon kɔbɔɔ afɔre wɔ hɔ efisɛ ɛhɔ ne sorɔnsorɔmmea a na agye din paa.*+ Solomon de mmoa 1,000 na ɛbɔɔ ɔhyew afɔre wɔ afɔremuka no so.+ 5 Bere a Solomon wɔ Gibeon no, Yehowa yii ne ho adi kyerɛɛ no wɔ dae mu anadwo; Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ: “Bisa me nea menyɛ mma wo.”+ 6 Ɛnna Solomon kae sɛ: “Woada ɔdɔ kɛse a enni huammɔ adi akyerɛ me papa, w’akoa Dawid; ɔde nokwaredi ne trenee ne koma a edi mu nantew w’anim. Woakɔ so ada ɔdɔ kɛse a enni huammɔ yi adi akyerɛ no abesi nnɛ; woama wanya ɔba ama wabɛtena n’ahengua so.+ 7 Na afei Yehowa me Nyankopɔn, minnyinii* koraa na minni osuahu,*+ nanso woasi w’akoa hene de me asi me papa Dawid ananmu. 8 Wo man a woapaw wɔn+ no yɛ ɔman a wɔn dodow nti, wontumi nkan wɔn na wontumi mmu wɔn ano, na w’akoa na ɔda wɔn ano. 9 Enti ma w’akoa ahobrɛase koma a ɔde behu papa ne bɔne+ na ɔde abu wo man atɛn,+ efisɛ wo man a wɔdɔɔso* yi de, hena na obetumi abu wɔn atɛn?” 10 Nea Solomon bisae no, Yehowa ani gyee ho.+ 11 Ɛnna Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ́ woabisa eyi, na woammisa nkwa tenten,* ahonyade, anaa w’atamfo nkwa,* na woabisa nhumu a wode bebu atɛn nti,+ 12 mɛyɛ w’abisade no ama wo.+ Mɛma wo nyansa ne ntease koma;+ wɔn a wodii w’anim no, obiara nnyaa bi saa da, na w’akyi nso, obiara rento wo.+ 13 Afei ahonyade ne anuonyam a woammisa nso, mede bɛka ho ama wo,+ na ɔhene biara nni hɔ a wo nkwa nna nyinaa* mu no, ɔbɛto wo.+ 14 Na sɛ wonantew m’akwan so di m’ahyɛde ne me mmara nsɛm so sɛnea wo papa Dawid yɛe no+ a, me nso mɛma wo nkwa tenten.”*+ 15 Bere a Solomon ani so tetew no no, ohui sɛ ɛyɛ ɔdae. Ɛnna ɔkɔɔ Yerusalem kogyinaa Yehowa apam adaka no anim, na ɔbɔɔ ɔhyew afɔre ne asomdwoe afɔre,+ na ɔtow pon maa ne nkoa nyinaa. 16 Akyiri yi, tuutuufo mmea baanu bi baa ɔhene nkyɛn begyinaa n’anim. 17 Ɔbea a odi kan no kae sɛ: “Me wura, mepa wo kyɛw, me ne ɔbea yi te ofi baako mu, na mewoe bere a na ɔwɔ fie. 18 Mewoe no, ne nnansa so na ɔbea yi nso woe. Yɛn baanu pɛ na na yɛwɔ hɔ; ná obiara nka yɛn ho wɔ ofie hɔ. 19 Eduu anadwo no, ɔbea yi daa ne ba no so ma owui. 20 Bere a w’afenaa ada a me ba no da me nkyɛn no, ɔsɔree anadwo dasum bɛfaa me ba no de no kɔtoo ne nkyɛn,* na ɔde ne ba a wawu no bɛtoo me nkyɛn. 21 Bere a mesɔree sɛ merema me ba no nufu no, mihui sɛ wawu. Nanso ade kyee a metɔɔ me bo ase hwɛɛ abofra no, mihui sɛ ɛnyɛ ɔno ne me ba a mewoo no no.” 22 Ɛnna ɔbea baako no nso kae sɛ: “Woboa, me ba na ɔte ase no, wo ba ne nea wawu no!” Ɔbea a odi kan no nso kae sɛ: “Woboa, wo ba ne nea wawu no, me ba na ɔte ase no.” Wogyee ho akyinnye wɔ ɔhene anim. 23 Afei ɔhene kae sɛ: “Oyi se, ‘Me ba na ɔte ase yi, wo ba ne nea wawu no!’ na oyi nso se, ‘Woboa, wo ba ne nea wawu no, me ba na ɔte ase no!’” 24 Ɔhene kae sɛ: “Momma me sekan.” Ɛnna wɔde sekan brɛɛ ɔhene. 25 Na ɔhene kae sɛ: “Mompae abofra a ɔte ase no mu abien, na momfa ɔfã mma mmea no baako, na momfa ɔfã a aka nso mma ɔbaako no.” 26 Esiane sɛ ɔbea a ne ba ne abofra a ɔte ase no nyaa ayamhyehye maa ne ba no nti, ɛhɔ ara na ɔpaa ɔhene kyɛw sɛ: “Me wura, mesrɛ wo, momfa abofra a ɔte ase no mma no. Munnkum no!” Ɔbea baako no de, saa bere no nyinaa nea na ɔreka ara ne sɛ: “Ɛbɛbɔ me ne wo nyinaa! Mompae ne mu abien!” 27 Ɛnna ɔhene kae sɛ: “Momfa abofra a ɔte ase no mma ɔbea a odi kan no. Munnkum no. Ɔno ne abofra no maame.” 28 Israel nyinaa tee atɛn a ɔhene abu no, na wosuroo ɔhene,+ efisɛ wohui sɛ Onyankopɔn ama no nyansa a ɔde bu atɛn.+
^ Nt., “sorɔnsorɔmmea kɛse.”
^ Anaa “meyɛ abofra.”
^ Nt., “minnim sɛnea mefi adi na maba mu.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wɔn so di yɛ den.” Nt., “wɔn mu yɛ duru.”
^ Anaa “w’atamfo kra.”
^ Nt., “wo nna nyinaa.”
^ Nt., “wo nna aware.”